Maalinta: Diseembar 10, 2017
BTSO kama yareeyso xawaaraha tababarka Ur-Ge
Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (BCCI), hawlgalka ganacsiga tareenka magaalada Bursa dhaqaalaha Turkiga si loo helo tartan saaxadda caalamka sii xawaare buuxa. Waxaa la hirgaliyay taageero laga helo Wasaaradda Dhaqaalaha Caalamiga ah [More ...]
Akcaray waxa ay gubeen gawaarida soo galaya tareenka
Gawaarida si joogto ah ayey u galaan wadada laamiga. Degmadu kama horjoogsan karto tan waqtiga, laakiin xaaladdu waxay is beddelaysaa waqti gaaban. Gawaarida soo gala wadada waa la ciqaabi doonaa. Sannadkii 8 ee Kocaeli [More ...]
Samsun-Sarp Wadahadalka xawaaraha ayaa bilaabmay
Khadaka tareenka ee Samsun-Sarp ayaa biloowday wadaxaajoodyo muujinaya xisbiga AK Party ee MP Metin Gundogdu wuxuu yiri: görüş Waxaan bilownay wadaxaajood ku saabsan hirgalinta qadkaan. Tani ma ahan mashruuc sahlan. Sanadka soo socda [More ...]
BTS: Adapazarlılar, Gara iyo Adapazari waa inay ahaadaan Express
Magaalada Sakarya, Ururka Shaqaalaha Gaadiidka ee United, oo ka soo horjeestay in la joojiyo Saldhigga Adapazarı, ayaa la kulmay xubno ka socda saxaafadda iyo wakiillada magaalada. Saldhigga 'Adapazar was' waxaa loo furay wicitaankii Ururka Shaqaalaha Gaadiidka ee Qaramada Midoobay (BTS) oo xiriir la leh KESK, [More ...]
Maanta taariikhda: 10 December 1928 Shirkadaha la xiriira dawladda ...
Maanta in wakiilka December 10 1923 Shirkadda Tareennada History National Hügn Turkey, Mukhtar Anatolia ee Bey, Ku-xigeenka Public Works iyo Tareennada ee Ankara ayaa isku raacay qoraalka heshiiska. Dawladda heshiiska iyo Golaha Nafiya [More ...]